China Welding Robot Series ifektri kanye nabaphakeli | UDaya
Zokushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-180
Zokushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-144
Zokushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-160
Zokushisela irobhothi uchungechunge JZJ06C-200
Ukushisela irobhothi irobhothi lezimboni elenza insimbi (kufaka phakathi ukusika nokufafaza). Ngokwencazelo yenhlangano yamazwe omhlaba yeStandisization (ISO) ukuthi irobhothi lezimboni lingele-robot elijwayelekile le-welding, irobhothi lezimboni liyi-multi-purpose, iphinda iphindaphindwe ehlelwe ngendlela enezimbazo ezintathu noma ngaphezulu ezihlelwayo, ezisetshenziswa emkhakheni we-automation yezimboni. Ukuze ukwazi ukuzivumelanisa nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene, isikhombimsebenzisi esibonakalayo se-axis yokugcina yerobhothi imvamisa iyisigaxa sokuxhuma, esingaxhunyaniswa namathuluzi ahlukile noma ama-end effectors. Welding irobhothi ukufaka Welding tongs noma Welding (ukusika) isibhamu ekugcineni shaft flange irobhothi zezimboni, ukuze ikwazi ukufeza Welding, ukusika noma sishaye ezishisayo.
Ukushisela irobhothi ukusetshenziswa kwamathuluzi ahlelwe ngomshini (amarobhothi), enza inqubo yokushisela isebenze ngokuphelele ngokwenza i-weld nokusingatha leyo ngxenye. Izinqubo ezinjengokushisela i-arc yensimbi yensimbi, ngenkathi kuvame ukuzenzekelayo, azilingani neze nokushisela irobhothi, ngoba opharetha ongumuntu kwesinye isikhathi ulungisa izinto ezizofakwa. Ukushisela irobhothi kuvame ukusetshenziselwa ukumelana nendawo yokushisela kanye nokushisela i-arc kuzicelo zokukhiqiza eziphezulu, njengemboni yezimoto.
Ukushisela irobhothi uhlelo olusha lwerobhothi, yize amarobhothi afakwa okokuqala embonini yase-US ngawo-1960. Ukusetshenziswa kwamarobhothi ku-welding akuzange kuqale kuze kube ngawo-1980, lapho imboni yezimoto iqala ukusebenzisa kakhulu amarobhothi ukuthola indawo yokushisela. Kusukela lapho, inani lamarobhothi asetshenziswa embonini kanye nenombolo yezicelo zawo likhule kakhulu. Ngo-2005, kwakusetshenziswa amarobhothi angaphezu kuka-120,000 embonini yaseNyakatho Melika, cishe ingxenye yawo ukufakwa insimbi.  Ukukhula kukhawulelwe ikakhulu izindleko zemishini ephezulu, kanye nemikhawulo evelayo kuzicelo zokukhiqiza okuphezulu.
Ukushisela i-Robot arc sekuqalile ukukhula ngokushesha muva nje, futhi vele iyala cishe ama-20% wezicelo zamarobhothi ezimboni. Izingxenye ezinkulu zamarobhothi okushisela i-arc yi-manipulator noma i-mechanical unit kanye nesilawuli, esisebenza "njengobuchopho" bamarobhothi. I-manipulator yiyo eyenza irobhothi lihambe, futhi ukwakheka kwalezi zinhlelo kungahlukaniswa ngezinhlobo eziningi ezijwayelekile, njenge-SCARA ne-cartesian coordinate robot, esebenzisa amasistimu wokuxhumanisa ahlukene ukuqondisa izingalo zomshini.
Welding Robot Series Amapharamitha Wezobuchwepheshe
Langaphambilini Uchungechunge oluyisithupha lwe-Axis Robot
Olandelayo: Wokushaya Die
I-SRF-A-Series Roller Servo feeder
Izingxenye Zokunyathela Umdwebo Ojulile 8